Posted by zizawa ⋅ 12/10/2010	⋅3Comments
Crito ကပြီးဖို့ နှစ်ခန်းလောက်ပဲ လိုတော့တယ်။ အဲဒိနှစ်ခန်းမှာ Socrates က သူ့ကိုသတ်ဖို့ ဖမ်းချုပ်ထားတာဟာ မတရားဘူးဆိုတာ သိလျက်နဲ့ ဘာ့ကြောင့်ထွက်မပြေးသလဲဆိုတာကို ကျိုးကြောင်းပြထားတယ်။ ဒီတော့ ဒီနှစ်ခန်းဟာ (၅၀ နောက်ပိုင်းကနေ အဆုံးထိ) တအုပ်လုံးမှာ အရေးကြီးဆုံးအခန်းတွေပဲ။ ဒီအခန်းနှစ်ခန်းကို မဆက်ခင် ခုရေးခဲ့ပြီးသလောက်မှာ အင်မတန်မှ အရေးကြီးတယ်လို့ထင်တဲ့၊ သေချာ စဉ်းစားသင့်တယ်ထင်တာ တခုရှိတယ်။ အဲဒါ ဘာလဲဆိုတာ ခုအခန်းမှာ ကြည့်ရအောင်။ သိတဲ့အတိုင်းပဲ၊ Socrates ကို အေသင်အာဏာပိုင်တွေက သေဒဏ်ပေးတာကို Socrates ကိုယ်တိုင်က မတရားလုပ်တာလို့ လက်ခံတယ်။ ဒါပေမယ့် ဘယ်တော့မှ မတရားမလုပ်သင့်ဘူးဆိုတာကို လက်ခံရင် ကိုယ့်ကိုမတရားလုပ်ရင်တောင် မတရားပြန်မလုပ်သင့်ဘူးလို့ Socrates ကပြောထားပြီးသား။Now my question is: Do you agree with Socrates here?
‘ကိုယ့်ကို မတရားလုပ်တာ သိလျက်နဲ့ မတရားမလုပ်သင့်ဘူး’ ဆိုတာဟုတ်သလား။ လူတယောက်က ကိုယ့်ကို ဓားနဲ့လိုက်ခုတ်ရင် ကိုယ့်ကိုယ်ကို ခုခံကာကွယ်တဲ့အနေနဲ့ ဒီလူကို ထိခိုက်အောင် ပြန်လုပ်တာကို ဘယ်သူကမှ အပြစ်ပြောကြမယ်မထင်ဘူး။ ဒါကို မတရားလုပ်တာလို့လည်း ပြောကြမယ်မထင်ဘူး။ ဒါဆိုရင် Socrates ကိုခံငြင်းဖို့ အစတခုတော့ ရပြီပေါ့။ (အင်မတန့် အင်မတန် သတ္တိကောင်းတဲ့လူပဲ ဒီအဖိုးကြီးကို ခံငြင်းကြမှာ။ :D) Crito ကတော့ မိုက်တယ်ပဲ ပြောမလား။ Socrates ကို အဲဒိအတိုင်း ငြင်းဖို့ကြိုးစားတယ်။ Crito ခံငြင်းဖို့ကြိုးစားတဲ့ argument ကို let’s call ita‘self-defence’ argument. အဲဒိargument ကို ဖီလော်ဆော်ဖီဘောင်ဝင်အောင် အတည်အခန့်ရေးကြည့်မယ်။ (တချိန်က ရေးခဲ့တဲ့ မှတ်စုတွေထဲက ပြန်ကူးတာ။ ဘာမှ ထူးထူးခြားခြား မဟုတ်ဖူး၊ second-hand ideas တွေပဲ။) P1: He may harmlessly escape fromamurderer in self-defence.
More later… watote
Posted by watote | 12/10/2010, 06:28 Reply to this comment	P1 ဟာ Socrates လိုဂွတီးဂွကျလူအတွက်ရော ကျုပ်တို့ ဗုဒ္ဓဘာသာအမြင်အရရော မှန်တယ်ထင်တယ်။
နောက်တခု ထူးထူးခြားခြားသတိပြုမိတာကတော့ ဒီလောက်နာမည်ကြီးလှတဲ့ ပုရောဟိတ်ကြီး Socrates က သူကိုယ်တိုင်ကျ ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ လက်ရေးနဲ့ချရေး ပြုစုခဲ့တဲ့ စာတွေမရှိဘူးဆိုပဲ။ သူ့တပည့်တွေကို နေ့စဉ်လက်ချာပေး အာရိုက်လေပွား ထားတဲ့ အရာတွေကို တပည့်တွေ မှတ်တမ်းတင်ထားတာပဲရှိတယ်ဆိုပဲ။ ပို့စ်အသစ်ထဲ မှာ P2 နဲ့ပတ်သက်တာ ရှိလောက်မှန်းသိပေမယ့် ဒါဖတ်ပြီးပြီးချင်းပဲ အရင် comment ချရေးဖြစ်တယ်။
Posted by Nanda | 14/10/2010, 17:26 Reply to this comment	ဗုဒ္ဓနဲ့ Socrates မှာ ဗုဒ္ဓက နည်းနည်းစောမယ်ထင်တယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း နှစ်ဆယ့်တစ်ရာစုကနေလှမ်းကြည့်ရင်တော့ ခေတ်ပြိုင်တွေဆိုလည်း မမှားလောက်ဘူး ထင်ပါတယ်။ သူတို့ နှစ်ယောက် ဆုံခဲ့ဖို့ကတော့ မဖြစ်နိုင်ဘူးထင်တယ်။ Crito ထဲ ဖတ်ရသလောက် Socrates ကအေသင်အပြင်ဆိုလို့ Isthmos ဆိုတဲ့အရပ်လောက် ရောက်ဖူးတယ်လို့ သိရတယ်။ သူစစ်မှုထမ်းအဖြစ် လိုက်သွားတဲ့ နေရာတွေထဲမှာ ကုလားပြည်ထိရောက်တယ်လို့ မကြားဖူးဘူး။ Aristotle တပည့် Alexander the Great လက်ထက်မှလား အိန္ဒိယထိရောက်တယ်လို့ သိရတယ်။
Posted by zizawa | 15/10/2010, 07:55 Reply to this comment	LeaveaReply Cancel reply	Enter your comment here...